Chikamu chekutama kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe chinosiyana zvakanyanya. Mune dzimwe nzvimbo, huwandu hwevanhu hunopfuura hafu, nepo kune vamwe, huwandu hwevanhu huri pasi pe0.1%. Ndeipi nyika ine vakanyanya kutama? vanobva kupi? Dzinogoverwa sei kutenderera pasirese? Takatsanangura pano huwandu uye huwandu hwevatorwa munyika dzakasiyana pasi rese.
Sekureva kweongororo yakaburitswa neasina bato rePew Research Center munaNovember 2019, vatorwa vanosvika muEurope vakasiyana zvakanyanya kupfuura huwandu hwevagari vemuUnited States. Iyi ndiyo yekutanga isingabvumirwe kupinda munyika muEurope mune anopfuura makore gumi Kuitika.
Kubva 2015, huwandu hwevanhu vari kutiza mhirizhonga mu Africa neMiddle East nekunanga kuEurope wakadzikira, apo huwandu hwevanotsvaga hupoteri (vangangosvika miriyoni imwe nehafu) vakapinda munyika dziri nhengo dzeOrganisation for Economic Cooperation and Development. Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose rakati nemavhiki ekutanga matanhatu e2020, vanhu vanodarika zviuru gumi nemana vachayambuka Gungwa reMediterranean, uye huwandu hwekukura hwakaderera zvakanyanya kupfuura mumakore apfuura.
NYIKA DZINOTORA VAVANHU VAKURUKURA
VERENGA ZVIMWE: KUFAMBA KWAZVO: ZVINOKONZERA, ZVINOGONESESA NEMAITIRO
United States yakabvuma 1,127,200 zvachose vanopinda mu2017, vachisara iri nyika yakanaka kwazvo kune vanoenda kune dzimwe nyika, kunyangwe paine kuderera kwe5% kubvira 2016. Iyi nhamba inoyera chinzvimbo chekugara zvachose chakapihwa uye hachisanganisiri kutamira kuUS neimwe nzira. Aya matsva ekupinda munyika akaita kuti vanhu vese vekuUS-vakaberekerwa kune dzimwe nyika vanopfuura zvikamu gumi nezvitatu kubva muzana. Muna 2015, United States yakagamuchira vapoteri 69 920, nhamba yakafanana neyegore rapfuura. Nekudaro, mu2017, kugamuchirwa kwevapoteri kwakaderera zvakanyanya, sekureva kweGeorge W. Bush Presidential Center, iyo inodoma manhamba eDhipatimendi reHurumende. Iyi yaive nhamba yakaderera kubva muna 2002. Mutungamiri Donald Trump vakaburitsa huwandu hwemahofisi ehutongi anokanganisa mutemo wekupinda kwevanhu munyika mumwedzi ichangopfuura, kusanganisira mirairo yekusimbisa kuchengetedzwa kwemuganhu nekuchengetedzwa kwemutemo wekupinda munyika, uye kugadzirisa hutongi pane vanyoreri veUS
Sekureva kwedata reOECD, Germany yakatambira vanhu vanosvika mazana masere nemakumi masere nemazana masere kubva muna2017. Kunyange hazvo dambudziko iri richitambudza vezvematongerwo enyika veGerman, rakadzikira ne18% kana zvichienzaniswa na2016.Vazhinji vakapinda vakabva kuRomania, Siria, Poland neBulgaria. Mu2016, vangangoita 23% yevagari vaive nemamiriro ekune imwe nyika, zvinoreva kuti ivo kana mumwe wevabereki vavo vakazvarwa vasina ugari hweGerman. Mukupesana, huwandu hwekutanga kunyorera hupoteri muna 2017 hwakadzikira zvakanyanya zvichienzaniswa negore rapfuura, kubva pa7222,000 kusvika pasi pe200,000. Vanyoreri vacho vanonyanya kubva kuSyria, Afghanistan, Iraq, Eritrea neIran.
I UK yakagamuchira 342,200 zvachose vanopinda mu2016, kudzika 3% zvichienzaniswa na2016.Boka rakakura kwazvo revatambi venguva refu vasiri vekuUK kuenda kuUK muna2016 vakabva kuRomania, vachiverengera dzinosvika gumi nemaviri muzana. Nekudaro, mumiriri uyu anogona kuchinja mukumuka kweakakosha nyaya yezvematongerwo enyika yeUK mu2016: Vhoti yekusiya EU – sarudzo inozivikanwa seBrexit – umo kunetsekana nezvekupinda munyika kwakabata chinzvimbo chakakosha. India, China nePoland zvakapawo vazhinji vakapinda muBritain.
Muna 2017, vanhu mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu vakanyorera hupoteri kuUK, kuderera kwehuwandu hwezvikumbiro zvakatanga muna2016. UK yakange yakaparadzaniswa nedambudziko rekutama riri kuzadza Europe sezvo rakaparadzaniswa nedzimwe nyika dzeEuropean maChirungu. Chiteshi.
Spain yakagamuchira 324,100 vatorwa zvachose muna 2017, kuwedzera kwe8% kupfuura gore rapfuura. Kubva pakatanga dambudziko remari repasirese, nyika yakawana gore rayo rekutanga rekutama mumambure mu2015.
Spain yekudzivirira kwepasirese kunyorera kwakakwira ne63% mu2017, ichisvika rekodhi nyowani ye25 270. Mukupindura kuwanda, nyika yasimbisa hutiziro nehurongwa hwekugara nekuwedzera mari nezvivakwa nekugadzirisa maitiro ayo ekubata vana vekunze vasina kuperekedzwa.
Canada yakagamuchira 286,500 zvachose vanopinda mu2017, kuderera kwe3% kubva pagore rapfuura re 296,400. Huwandu hwevapfumi vakapinda mu2017 hwakawedzera ne2% kupfuura gore rapfuura, vachisvika 159,000. Ichi chikamu chinosanganisira vane hunyanzvi vashandi uye vanamukoti vashandi. Mumakore mashoma anotevera, vekuCanada vanoenda kune dzimwe nyika vanotarisirwa kuramba vachichengetedza rekodhi, uye huwandu hwakarongwa hwevatorwa muna 2020 hunosvika 340,000.
Huwandu hwevapoteri vakabvumirwa muna 2017 hwaive 41,500, 30% yakaderera kubva muna 2016. Zvisinei, nhamba yezvikumbiro zvitsva zvekupotera muna 2017 zvakapetwa kaviri kubva mugore rapfuura kusvika pa50,470. Kunyangwe Prime Minister Justin Trudeau akasimbirira kuti vapoteri vacharamba vachigamuchirwa muCanada, kuwanda kwevazhinji kwakaisa zviremera pasi pesimba.
Mu2017, France yakagamuchira 258,900 vanopinda zvachose, nhamba yakafanana neyegore rapfuura. Muna 2015, nyika yakapa 217 500 mvumo yekugara kune vagari venyika dzisiri dzeEU. Chete chetatu vaibva kuchamhembe kweAfrica uye vanopfuura chikamu chimwe muzvishanu kubva kuSub-Saharan Africa. Kunyangwe chete 20,500 mvumo yekugara itsva yebasa yakapihwa, kutama kwehupfumi kwakawedzera nezvikamu zvisere muzana muna 2015.
Sarudzo yemutungamiri wenyika muna 2017 yakaisa vanopikisa kutama uye EU. Marine Le Pen inopesana nekufambira mberi Emmanuel Macron mumujaho unoyeuchidza nezve 2016 US neUK sarudzo. Mukupedzisira, bato raMacron rekuenda kune dzimwe nyika rakakunda, kunyangwe nzvimbo yake pakukosha kwerubatsiro rwevapoteri yakanga isina kusimba. France yakagashira kwakatenderedza 91,070 kunyorera mu2016, ingangoita 20% kupfuura mugore rapfuura. Iyo nhamba yakaisa rekodhi nyowani yekushandisa Zvizhinji zvezvikumbiro zvinobva kuSudan, Afghanistan neHaiti.
Australia yakagamuchira 218,100 vatorwa zvachose muna2017, kuderera kwe4% kubva muna2016 uye kuderera kwe37,000 kubva mugore ra2013. Vazhinji vakapinda kubva kuIndia, vachiteverwa neChina neUnited Kingdom.
Sekureva kwedata reOECD, Australia yakagamuchira 35,170 nyowani dzekukumbira hupoteri muna2017, zvichikwira kubva pamusoro peanopfuura 27,000 gore rapfuura. Vanotsvaga hupoteri nevapoteri vanonyanya kubva kuIraq, Syria, Myanmar, Afghanistan neDemocratic Republic of Congo. Mutemo weAustralia une nharo wevapoteri unosanganisira kubhadhara nyika diki dzezvitsuwa zveNauru nePapua New Guinea kuti vagadzirise vanotama pasi pemamiriro akashurikidzwa nemapoka ekodzero dzevanhu.
Australia yakaramba kugadzirisa vanotsvaga hupoteri vakaedza kusvika nechikepe. Muna 2016, muchibvumirano chakaitwa neUnited States, Canberra yakazivisa kuti ichagamuchira nhamba isingazivikanwe yevapoteri kubva kuchirongwa cheCosta Rican chinotungamirwa neUnited States, uye United States yakati ichagamuchira huwandu hwevapoteri hwakarambwa neAustralia. . Mutungamiri weUS Donald Trump pakutanga akashoropodza chirongwa chakagadzirwa nevaimbove Mutungamiri Barack Oabama, asi vakuru veUS vakazotaura kuti hurongwa uhu hucharemekedzwa.
Italy yakagamuchira 216,900 vanopinda zvachose muna2017, kuwedzera kwe2% zvichienzaniswa ne216. Huwandu hwevatorwa vanogara munyika hwapfuura mamirioni mashanu. Chete chetatu vakazvarwa muEU, nepo ruzhinji rwevasiri-EU vagari vaibva kuRomania, Albania, Morocco, China neUkraine. Mushure mekubatanidzwazve kwemhuri, kuchengetedzwa kwevanhu kwakapa mugove mukurusa mukupa mvumo nyowani, inosvika ku28%.
Italy, nyika iri pamberi pevapoteri vanosvika, inopa chiitiko chekuda kwevapoteri vehupenyu huri nani maringe nenyika dziri kunetseka kutarisira vanhu vakaponeswa muMediterranean uye vakaunzwa kumahombekombe ayo. Mu2017, 126,550 zvikumbiro zvekupotera zvakaendeswa, zvinoreva kuti kuenderera kwekuwedzera kwegore kubva 2010.
Netherlands yakagamuchira 141 500 vanopinda zvachose muna 2016, kuwedzera kwe2% kupfuura gore rapfuura.
Muna 2017, zvikumbiro zvekupotera zvakaramba zvichiratidza kudzikira. Gore rakapera, nyika yakagamuchira mafomu matsva 16,090, kuderera kweanosvika makumi maviri muzana kana zvichienzaniswa na2016. Nyika yakagamuchira zvinyorwa zvekupotera 43,100 mugore ra2015.
Mumusarudzo dza2017, Mutungamiriri weDutch Mark Rutte akakunda Geert Wilders, mukurumbira anozivikanwa nekurwisa kwake kupinda munyika pamwe neanopokana neIslam chikuva. Nekudaro, zvinoenderana nezvakapihwa muchibvumirano cheEU cha2015, dare reDutch rakaramba richitonga kuti hurumende haigone kumanikidzwa kutambira vazhinji vanoenda kune dzimwe nyika nemutemo.
Sweden yakagamuchira 132,200 vanopinda zvachose muna2017, iko kuderera kwe15% kubva muna 2016. Net immigration kuenda kunyika (kubvisa huwandu hwevanhu vanobva munyika) yakasvika pachidimbu 117,000 muna 2016.
Mukupesana, OECD yakataura kuti huwandu hwezvikumbiro zvitsva kubva kune vanotsvaga hupoteri munyika hwaderera mumakore apfuura. Huwandu hwezvikumbiro zvehupoteri muna2017 hwaive 22,190, zvichidzika kubva pa22,300 muna2016 uye chinyorwa 156,460 muna2015. Iyi nhamba yakurudzira nyika inogara ichichinja mafoni ekuti ichinje mitemo yayo yekubvumidza vapoteri nevanotsvaga hupoteri. Ongororo yepasirese yakaburitswa mu2016 yakaratidza Sweden senyika yakanakisa yekutamira mune zvehupfumi.